सवारी राजस्व रू. १ करोडभन्दा बढी सङ्कलन | गृहपृष्ठ
Home यातायात सवारी राजस्व रू. १ करोडभन्दा बढी सङ्कलन
on: २० कार्तिक २०७५, मंगलवार ०९:५२ यातायात
कावासोती । यातायात सेवा कार्यालय, कावासोतीले १ महीना अवधिमा रू. १ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालय प्रमुख जितबहादुर भण्डारीका अनुसारका सवारीसाधन नवीकरण र अस्थायी रूट परमिट (पटके) शीर्षकमा उक्त रकम सङ्कलन भएको हो । असोज १७ गतेदेखि कात्तिक १७ गतेसम्ममा २ सय २५ चारपाङ्ग्रे सवारी र १ हजार ४ सय ४२ दुईपाङ्गे्र सवारीसाधन नवीकरण भएका छन् । यी सवारीसाधनको नवीकरणबाट रू. १ करोड ३ लाख ११ हजार सङ्कलन भएको छ भने पटके शुल्कबाट रू. २२ हजार सङ्कलन भएको छ ।
यद्यपि, सवारी जाँचपासको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राहीले पूर्णरूपमा सेवा पाउन नसेकेको लेकबेशी यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष युवराज बस्यालले बताए । रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनलाई सहज भएको छ, तर कालो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनलाई भने बुटवल र नारायणगढ पुग्न परेको समितिका उनले गुनासो गरे । ‘यातायात सेवा कार्यालयले सवारी जाँचपास र रूट परमिटको व्यवस्था गरे बल्ल हामीहरूलाई सुविधा पुग्छ,’ उनले भने ।
यातायात सेवा कार्यालय, कावासोतीका प्रमुख भण्डारीले भने दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा जाँचपास र रूट परमिटको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताए । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले असोज १७ गते कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । गण्डकी प्रदेशमा पोखरापछि सबैभन्दा बढी सवारीको चाप हुने जिल्लाको रूपमा नवलपुर रहेको छ ।